Naga caawi hogaaminta kacdoonka suuq geynta | Martech Zone
Caawi Hogaaminta Jabhada Suuqgeynta
Axad, Febraayo 3, 2019 Axad, Febraayo 3, 2019 Douglas Karr
Markii ugu horeysay ee aan la kulmo Calaamadee Schaefer, Markiiba waan ku qancay khibradiisa iyo fahamkiisa qoto dheer. Mark wuxuu la shaqeeyaa shirkadaha hogaaminaya sida loo hagaajiyo dadaalkooda suuq geynta. Intii aan ahaa xirfad yaqaan ku takhasusay shaqadan, waxaan fiiriyaa in yar oo hogaamiyayaal ah aragti - Mark ayaa ka mid ah hogaamiyaashaas aan fiiro gaar ah u leeyahay. In kasta oo Mark uu yahay halyeey khibrad u leh suuqgeynta, haddana waxaan ku qancay inuu ku booday madaxa-koowaad ee suuq-geynta warbaahinta bulshada.
Waxaan lahaa Mark on my Martech Zone Wareysiyada Podcast, wuxuu kula kulmay dhacdo, saaxiibtinimaduna waa weynaatay. Isagu waa saaxiib wanaagsan inuu yeesho, isaga oo aan ku qanacsanayn qaabkiisa si uu kuu maqlo waxaad u baahan tahay. Waxaan iskaashi ka sameynay Nalalka Dell Podcast halkaasoo Mark iyo Dell ee B2B Saameynta Saameynta & Abuurista Mawduucyada, Konstanze Alex, ay u arkeen fursad ay ku iftiiminayaan hibada cajiibka ah ee Dell Technologies ay ku hoos leedahay astaamahooda. Weligay maan samayn taxane podcast sidan ah oo Mark ayaa igu riixay inaan ka caawiyo cilmi baarista oo aan soo saaro riwaayad la yaab leh. Marnaba isaga ma bixin karo isaga oo fursad iga helay!
Marka, qiyaasi layaabkayga markaan ka helo xirmo boostada Xalka Suuqa Schaefer. Sanduuqa dushiisa daaqad ayaa ku jirtay waxa ku jira, a Mucaaradka Suuqgeynta sumad.
Waxaan furay sanduuqii gudahana waxaa ku xirnaa xirmo xiiso leh, oo u muuqday, dhadhamisyo aan xiriir la lahayn ama tilmaamo:
Haddii aad si dhow u eegto, shay kasta waxaa si taxaddar leh gacanta loogu calaamadeeyaa lambarka bogga:
Saabuun gacan ku sameys ah - Bogga 9
Calaamadda Cabbitaanka Bilaashka ah ee Westworld - Bogga 199
Salve maqaarka maqaarka - Bogga 232
Maroodi cufan - Bogga 232
Hagaag, hadda waan xiiseynayaa oo durba waxaan kafeegayaa tusmada, qaamuuska, iyo bogagga calaamadeysan. Iyo, sidaan u furey buugga, waxaan ka helayaa qoraalkan cajiibka ah, shaqsi saxeexan ee Mark:
Sidoo kale, waxaa jira kaar ay ku qoran tahay qoraal shaqsiyeed iyo warqad ku dhejisan Suuq geynta laptop-kayga.
Xariifsan… Mark gebi ahaanba wuu igu nuugay!
Laakiin waxa Mark ku dhammaystiray isagoo tan samaynaya, laftiisa, cashar. Waxaan kula wadaagayaa buugga Mark, laakiin isagu wuxuu bilaabay nuujinta igu dhiirrigelisay.
Muxuu Buuggan Xasaasi u yahay?
Macmiil cusub oo aan leeyahay ayaa i weydiiyay xeelad ay dejinayaan. Kooxda iibintoodu waxay aqoonsan doontaa rajada, waxay ka heli doontaa cinwaankooda emayllada dhinacyada saddexaad, waxayna si otomaatig ah emayllo hordhac u ah iyaga ka heli doonaan. Waxay ii sheegeen inay ka walaacsan yihiin heerarka gujinaya ee hooseeya iyo wax soo saarkooda guud. Waxaan u sheegay inay ahaadaan… oo ay u baahan yihiin inay joojiyaan been abuurka shirkadahaas. Waxay kala fogeynayeen rajada, oo ayan jeclayn.
Markay muujineyso Mark, tani waa Xeer # 1:
Jooji Waxyaabaha Macaamiilku Neceb Yihiin.
Manifesto loogu talagalay suuqgeynta ku saleysan aadanaha
Waxaan ka shaqeyneynaa isbeddelo istiraatiijiyadeed oo isdaba-joog ah oo hadda ka socda shirkadda, dhammaantoodna lagu dhisay aasaas u ah dhisidda kalsoonida iyo ka faa'iideysiga qadarinta ay horeyba ula sameeyeen macaamiishooda. Waxaan u wareejineynaa shirkadda inay noqoto aadanaha.
Kaliya waxaan marayaa badh Kacdoonka Suuq geynta, laakiin markaan lahadlayo, waxaan hada fahmay sababta uu ugu jecelyahay muhiimada buugan. Cilmi-baarista, fikradaha, iyo daraasadaha kiisku waa inay ruxaan aasaaska gabi ahaanba cashar kasta oo lagaa riixay tobannaankii sano ee la soo dhaafay.
Waa jabhad aad loogu baahnaa qoraalkanna aniga ayaa calanka kor u qaadaya waxaanan gacan ka geysanayaa sidii loo wadi lahaa isbedelka.
Muxuu Jabhada Suuq Ku Baran Doonaa
Sida isbeddelada macaamiisha cataclysmic ay u yihiin natiijo la saadaalin karo oo kacaan ah oo bilowday 100 sano ka hor.
Maxay tahay sababta ay tahay in ganacsiyada loogu dhiso waxqabadyada suuq-geynta macaamiisha laga abuuray halkii ay ka ahaan lahaayeen xayaysiis dhaqameed.
Shanta runta aadanaha ee joogtada ah ee udub dhexaadka istiraatiijiyadda suuqgeynta.
Maxay daacadnimada macaamiisha iyo funaanadaha iibku u dhimanayaan iyo waxaad u baahan tahay inaad ka qabato hadda.
Sida looga caawiyo macaamiishaada ugu fiican inay kuu sameeyaan suuqgeynta adiga.
Tallaabooyin waxqabad leh oo si toos ah u siinaya koorso-sixitaan ah ganacsiyada nooc kasta oo ay yihiin.
Aad ayaan ugu mahadnaqayaa inaan u yeedho Mark saaxiib oo gabi ahaanba kugula taliyo inaad si dhakhso leh u soo qaadatid buuggan. Waxaad awoodi doontaa inaad saameyn deg deg ah oo lama filaan ah ku yeelato dadaalka suuqgeyntaada.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Kacdoonka Suuq-geynta
Tags: Calaamadee Schaefercaasinimada suuq geynta
Sida loo Daahfuriyo Bogga WordPress ee ku habboon Raadinta
Afarta E-Ganacsi E-Computers Waa inaad korsataa